SAP HR - Maareynta waqtiga
2021-08-05 Casharrada saa...
SAP HR - Maaraynta waqtiga Maaraynta wakhtiga SAP waa qayb ka hoosaysa maareynta SAP HR, kaas oo ay u adeegsadaan shaqaaluhu kormeerka iyo maaraynta waqtiga ee waaxyaha. Maareynta waqtiga waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee urur kasta maadaama ay lagama maarmaan tahay in waqtiga la sii wado s...
Sida loo habeeyo oo loo beddelo astaamaha saxarka nidaamka ee Windows
2021-08-05 Sayniska kombi...
Codsiyada oo idil ma wada shaqeeyaan xagga hore. Qaar baa si aamusnaan ah gadaal ugu fadhiya, adiga oo ku shaqaynaya astaan ​​ku taal aagga ogeysiinta - sidoo kale caadi ahaan (laakiin sida muuqata si khaldan) loo yaqaan saxaarad nidaamka. Daaqadaha waxay kaa caawinayaan inaad maareyso jahawareerkan...
Linux / UNIX: u beddel lambarka hexadecimal lambar tobanle
Linux UNIX: U beddelidda Lambar Hexadecimal illaa Lambar tobanle Sideen ugu beddelaa lambarka hexadecimal lambar tobanle anigoo adeegsanaya qoraalka qolofka ee nidaamyada hawlgalka UNIX Linux? Hexadecimal (hexadecimal) waa nidaam lambar leh sal ama saldhig 16. Waxay isticmaashaa lix iyo toban cala...
14-inch MacBook Pro (2021) taariikhda siideynta, qiimaha, wararka iyo daadinta
Apple waxay hadda bixisaa laba nooc oo MacBook Pro oo kala duwan, nooc aad u cufan 13-inji iyo laptop weyn oo 16-inji ah. Tan dambe waxay beddeshay moodelkii hore ee 15 -inji bishii Nofembar 2019, waxaana la rumeysan yahay in marka Apple ay timaaddo inay cusboonaysiiso MacBook Pro -ka yar 2021, si l...
10 -ka sare ee noocyada kala duwan ee timaha ka -saaridda iyo waxa ay adiga kaaga jeedaan, si aakhirka si fiican laguugu barto
Haddaan dumar nahay dhammaanteen waxaan eegeynaa arrintan qodxa badan ee timaha. Jeclow ama ha ahaato jidka, maxaa yeelay, ka dib oo dhan, haddii timo jirto waxaa laga yaabaa inay sabab wanaagsan u leedahay markaa maxaad u rabtaa inaad uga baxdo kharash kasta? Marka la soo koobo, meel kasta oo aad a...